Our Caalamkeenna Ka dib Wiki Abuurid - Caqli-gal ah Muuqaalka
Wikipedia waa buug-gacmeed bilaash ah oo caan ah, oo leh 36 milyan oo maqaallo ah oo ku qoran 250 luqadood oo kala duwan. Hadda, waxay noqotay ilaha ugu weyn ee ugu kalsoon ee macluumaadka internetka. Ingiriis Wikipedia keliya ayaa ka badan shan milyan oo maqaalo waana bogga lixaad ee bogga intarnetka ee internetka - zephir recensioni.
Ryan Johnson, Maamulaha Taageerada Macaamiisha Macaamilka Taageerada Macaamiisha, ayaa sheegaya in ka hor intaan abuurin Wikipedia, diiwaanka ugu weyn ee ugu fiicnaa ee aqoonta loo yaqaan "Yongle Encyclopedia", oo la sheegay in uu ku jiro 22,935 liiska qoraallada. Markii Jimmy Wales abuuray website-ka 2001-dii, Wikipedia-nuqulkii asalka ahaa wuxuu ahaa qof walba oo internetka ah. Maanta, waxay haysataa in ka badan nus malyan qof oo booqanaya boggaga kala duwan ee Wikipedia bil kasta. In ka badan 80,000 oo mutadawaciin ah ayaa boggooda si joogto ah u baddalaan, dad badanna ma aysan aqoonin internetka iyada oo aan Wikipedia la siin. Waxay ku xiran tahay bogag iyo bogag kale oo badan.
Macallimiin, cilmi baarayaal, suxufiyiin, ardayda, iyo xirfadlayaasha caafimaadku waxay ku xiran yihiin Wikipedia, sababtoo ah macluumaadka saxda ah. Waxaan raadin karnaa mowduucyada oo dhan oo ku saabsan ansixintan, iyo khabiiradu waxay isticmaaleen xogtooda si ay u saadaaliyaan waxyaallaha filimka xagjirka ah ilaa qiimaha sarrifka. Waqtigaas, qorayaal iyo tifaftirayaal kala duwan ayaa soo gudbiyay boggooda Wikipedia oo ku qoran luuqado kala duwan. Shaqaalaha rayidka ah, siyaasiyiinta, jilayaasha, iyo dhammaan noocyada dadka ayaa u adeegsanaya ilaha ugu muhiimsan ee macluumaadka internetka..Xitaa madaxii hore ee IBM oo sameeyay 47,000 oo ereyo ah oo ereyada 'ka kooban' oo loo yaqaan 'Wikipedia' oo ah bogga ugu fiican.
Si ka duwan Google, Facebook iyo Apple, Wikipedia maaha wax faa'iido leh internetka. Tusaale ahaan, Apple Inc. wuxuu ku diiwaangashan yahay faa'idada sanadlaha ah ee ugu wanaagsan iyo tariikhda taariikhda shirkadaha waxana uu ku guuleystey daacadnimada macaamiisha caalamiga ah sababtoo ah adeegyadeeda iyo alaabadooda.
Dhanka kale, Wikipedia ayaa had iyo jeer ahaa bogga internetka ee qoraallada ku-salaysan iyo waxyaabo badan oo la taaban karo oo leh daabacado badan oo la daabacay maalin kasta. Aqoon-isweydaarsigan tabaruca ah wuxuu u shaqeeyaa sida urur weyn oo aan faa'iido doon ahayn oo adduunka ah, taas oo inta badan la sii wado iyada oo loo marayo deeqda bulshada caalamka. Wikipedia ayaa had iyo jeer dajiya rikoodh cusub oo wuxuu soo bandhigay fikrado cusub oo ku saabsan xayeesiinta iyada oo loo marayo bogagga iyo kafaaladaha la kafaalo qaaday
Inkasta oo Wikipedia uusan wax faa'iido ah helin, waxa ay carqaladaysay qaababka ganacsiga iyo warbaahinta bulshada bilihii dhawaa, iyada oo ay ka bilaabantay waxbarashada dugsiga ilaa daabacaadda maqaalada. Wikipedia waxaa badanaa lagu eedeeyaa burburinta moodooyinka dhaqaalaha, waana dambi inuu ka tirtiro xogta la soo dhaafay iyo siinta macluumaad si aad u cusbooneysiiso
Waa muhiim muhiim u ah Wikipedia in uu diiradda saaro saxnimada, waana in ay ku haboonaato da 'kasta. Shaki kuma jiro, Wikipedia ayaa bedeshay habka aan raadinta maqaalada internetka, laakiin weli waxa jira cillado badan. Sidaa darteed, waxay u baahan tahay in la gaaro dhibic halkaas oo aysan jirin meel loo helo macluumaad aan sax ahayn oo khaldan.
Qalabaynta tiknoolajiyada moobiilka waa in ay ahaato mudnaanteeda maaddaama dad badani isticmaalaan qalab mobile ah si ay u helaan internetka. Haddii Wikipedia uu rabo in uu gaaro himilooyinka la rabo, waa in ay u sahlanaato in la helo dhamaan qalabka iyo luqadaha kale. In muddo shan iyo toban sano ah, Wikipedia ayaa noqotey dadaalka ugu wanaagsan ee ugu weyn ee aadanaha. Diiwaanka taariikhiga ah ee taariikhda taariikhda macnaheedu maaha wax la dhaqi doono mustaqbalka